Olee otú Naghachi ehichapụ Pictures si Draịvụ
> Resource> Draịvụ> Olee naghachi ehichapụ Pictures si Draịvụ
Olee Otú M Pụrụ Naghachi ehichapụ Pictures si m Draịvụ?
Hi onye ọ bụla, m na mberede ehichapụ ụfọdụ foto site na Foto dị na nchekwa na kọmputa m. Echere m na ha ka bụ ndị na kọmputa m si ike mbanye. M na-eche echiche banyere otú ka m foto azụ. Ị nwere echiche ọ bụla?
Gị chere ziri ezi. The ehichapụ foto bụ na kọmputa gị si ike mbanye, chere na ị nwere ike agaghịkwa nweta ha ozugbo. Tupu overwritten site ọhụrụ data na kọmputa gị si ike mbanye, ndị ehichapụ foto nwere ike omume-natara na a ike mbanye ehichapụ foto mgbake usoro.
Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac bụ gị nhọrọ kasị mma na-agbake ehichapụ foto ndị si ike mbanye nke Windows kọmputa ma ọ bụ Mac. Ị na mkpa a ole na ole clicks iji naputa gị ehichapụ oyiyi. Download a ikpe mbipute nke usoro ihe omume ka iṅomi ehichapụ Foto ndị dị na draịvụ ike gị. Ị ga-enwe ike ihuchalu hụrụ photos na draịvụ ike gị n'ihu mgbake.
Naghachi ehichapụ Pictures gị ike mbanye na 3 Nzọụkwụ
Ka ịrụ ike mbanye ehichapụ image mgbake na Wondershare Data Recovery maka Windows.
Nzọụkwụ 1 Họrọ mgbake mode na-amalite ike mbanye ehichapụ foto mgbake
Mgbe wụnye na launching Wondershare Data Recovery na gị Windows kọmputa, ị ga-nyere na ọtụtụ mgbake ụzọ.
Ebe a, na-agbake ehichapụ foto ndị si ike mbanye, ka na-agbalị "Echefuola File Iweghachite" mbụ.
Cheta na: Unu wụnye ihe omume na draịvụ ike na gị na foto e ehichapụ.
Nzọụkwụ 2 iṅomi nkebi anya n'ihi na ehichapụ foto
Biko họrọ nkebi na gị foto e ehichapụ na pịa "Malite" na-amalite ịgụ isiokwu furu efu foto.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị na-aga na-agbake foto site na mpụga ike mbanye, i kwesịrị jikọọ ya na gị na kọmputa na-eme n'aka na ọ ga-ghọtara site na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 3 weghachite ehichapụ foto ndị si ike mbanye
Na njedebe, gị ehichapụ foto niile ga-hụrụ na egosipụta na mmemme window. Ịnwere ike ihuchalu ha ka ha ego otú ọtụtụ gị ehichapụ foto ike-natara.
Mgbe ahụ, ị ​​dị nnọọ mkpa ka họrọ ha na pịa "Naghachi" button na-azọpụta ha azụ gị na kọmputa. Na izere data overwritten, ị ga mma na-natara oyiyi na ọzọ nkebi.
Windows XP undelete: Olee otú undelete Windows XP Files
Mac mpụga ike mbanye Iweghachite Guide
Olee otú Naghachi Data si Nwụrụ Anwụ ike draịva
Ihe niile banyere Draịvụ Iweghachite nkebi ma nkebi Iweghachite